मेमोरी कि`ङ्ग विजय शाहीको सम्झने सु`त्र यस्तो रहेछ ! भिडियो हेर्नु होस् – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/मेमोरी कि`ङ्ग विजय शाहीको सम्झने सु`त्र यस्तो रहेछ ! भिडियो हेर्नु होस्
काठमाडौं ०६ साउन तीस से`केण्डमा एक सय भन्दा बढी शब्द सम्झेर कालि`कोटका १९ वर्षीय विजय शाही अहिले चर्चामा छन् । उनलाई तेजस्म`रण शक्ति भएका विश्वका की`र्तिमानी मानिएको छ । उनी कालिकोटका स्थानिय युवा हुन् । उनले ३० सेकेण्डमा १ सय भन्दा बढी शब्द स`म्झेर वि`श्व रेकर्ड कायम गरेका हुन् ।
विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि शा`हीलाई अहिले अन्तर`वार्ता दिन भ्याइ न`भ्याई छ । उनले एउटा निकै ठूलो किताव सररर हेर्छन् त्यसपछि त्यो कि`ताब बन्द गरेर त्यसमा भएका शब्द उत्ति खेरै सुनाउन र लेखेर दे`खाउन सक्छन् ।